वर्ल्ड कपका बेला एक भारतीय खेलाडीले बीसीआई नियमको उल्लंघन गरेको खुलासा
२० साउन । भारतीय क्रिकेट टीमका एक वरिष्ठ सदस्यले विश्वकपका बेला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई)को ‘परिवार संबंधित’ नियम उल्लंघन गरेको खुलासा भएको छ ।
खेल सकिसकेपछि मात्र ती खेलाडीले श्रीमतीलाई टुर्नामेन्टको पुरै समय, सात हप्ता आफ्नो साथमा राखेको कुरा खुल्न आएको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सेमीफानल सम्म पुगेका ती खेलाडीले बीसीसीआई नियमको उल्लंघन गरेका कारण उनी आलोचनाको घेरामा परेका छन् । यी खेलाडीले बीसीसीआई अनुसार आफ्नो पत्नीलाई १५ दिनसम्म साथमा राख्न पाउने व्यवस्था भएपनि उनले सो भन्दा बढी समयसम्म साथमा राखेको आरोप लागेको छ । ती खेलाडीले १५ दिन भन्दा बढी समय श्रीमतीलाई साथमा राख्ने अनुमतिका लागि अनुरोध गरेका थिए तर नियामक समिति(सीओए) ले उनको अनुरोध इन्कार गरिदिएको थियो ।
बीसीसीआईका प्रशासक सीओएले ३ मईको बैठकमा यस मुद्दा बारे पनि चर्चा गरेको थियो, तर ती खेलाडीको अनुरोधलाई स्वीकार नगरेको स्रोत उल्लेख गर्दै समाचारमा जनाइएको छ ।
यससम्बन्धी जानकारी राख्ने बीसीसीआई सूत्रले पनि उनले नियमको उल्लंघन गरेको पुष्टि गरेका छन् । उनले विश्वकपको दौरान १५ दिनको नियमको उल्लंघन गरेका थिए । यी खिलाड़ीले अपनी पत्नीलाई बढी समय साथराख्ने अनुमति कोच या कप्तानसँग लिएका थिए वा थिएनन् भन्ने कुराको कुनै स्पष्ट जबाफ बाहिर आएको छैन ।
यो मामीला बारे प्रशासनिक मैनेजर सुनिल सुब्रमण्यमले किन जानकारी दिएनन् ? जबकी यस बारे सम्पूर्ण अधिकार उनमा हुन्छ । बीसीसीआईका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार ‘सुनील सुब्रमण्यम त्यत्तिबेला के गरिबसेका थिए । उनको काम टीमको टे«निङ सत्रको निरीक्षण गर्नु पर्ने थिएन ? । कोच, कप्तान तथा अन्य सहयोगी स्टाफ यो विषयलाई हेरि बसेका थिए ? भन्ने प्रश्नहरु उठाइएका छन् । आशा राखौँ सीओएले यस माममीलामा गम्भिर छानविन गर्नेछ र मैनेजरसँग रिपोर्ट माग्नेछ । सुब्रमण्यमसँग यस विषयमा कुराकानी गर्न नसकिएको बताइएको छ ।
भारत र अष्ट्रेलिया बिचको तेस्रो तथा अन्तिम ODI आज, राहित शर्मा र शिखर धवन चोटिल
५ माघ, काठमाडौँ । भारत र अष्ट्रेलिया बिचको तेस्रो तथा…
को को छन त सन्दिप आवद्ध टिम दिल्ली क्यापिटल्समा
३ माघ, काठमाडौँ । पौष ३ गते भएको आईपिएल अक्सनमा…
भारत र अष्ट्रेलिया बिचको दोस्रो ODI आज
काठमाडौँ किंग्स ११ मा अनुबन्ध भएपछि सन्दिपले गरे यस्तो ट्वीट
विराट कोहलीले किने अडी क्यू८ (Audi Q8) कार, हेर्नुहोस् होसै उडाउने मूल्य
विश्वकपमा २० टिम पुर्याउने तयारीमा आईसीसी